Waa sidee Midnimada Soomaaliya kadib 58-sano xurnimo qaadashada? – Hornafrik Media Network
Waa sidee Midnimada Soomaaliya kadib 58-sano xurnimo qaadashada?
By HornAfrik	 On Jun 26, 2018
Hornafrik- Saq dhexe habeen 26-ka june xalay oo kale sanadkii 1960 oo laga soo gudbay 58-sano ayaa dhulka Soomaaliya qeybti ugu horeeysay ka xurowday gumeystihi Ingiriska , calankeena cawaale ayaana laga taagay.
Waxaa xurnimada qaatay oo calanka Soomaaliya lagatagay gobolada Waqooyi.
Waxay maanta tahay maalin ku weyn Umada Soomaaliyeed waa maalinti ay heleen ama u bilaabatay xurnimada , waxaana maalmo kadib marka lagaro kowda luulyo loo dabaagl degayaa markii ay gobolada koonfureed ka xurooben gumeystihii talyaniga islmarkaana ay labada dhinac xurnimada ku midoobeen.
Toobaadkan ayaa ah todobaadka xuriyada waxaana xiligasi madaxdii , abwaanadii iyo cuqaashi joogtay ay jeediyeen hadal lagu cabirayo qiimha xuriyada
Madaxweynihii xiligaasi ee Soomaali alle ha u naxariistee Aadacn cabdulle Cismaan Aaadacn cadde ayaa si farxi ku dhaahantahay shacab weynaha Soomaaliyeed ugu sheegay in ay tahay maalintii la noqday Soomaali xor ah , waxaana la ridayay rasaas farxa awgeed.
Madaxweyne Aaadan cade ayaa Dadka Soomaaliyeed si ay u ilaaliyaan xornimada xiligaasi la helay iyo midnimada waxaa uu kula dardaarmay in ay ilaalsadaan.
58-sano kadib xurnimo qaadashada Soomaaliya maanta dad baadn oo soomaaliyeed ayaa walaac waxa aay ka qabaan sida ay wax ku wadaan Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ay madaxd goboleedyadu ugu horeeyaan.
Waxaa qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada lagu eedeyaa in ay dowlado shisheeyee la galaan heshiisyo aaney dowladda ka warqabin taasi oo wax u dhimi karta madax bananaida Soomalaiya e halganka dheerlaga soo maray.
Soomaaliland waxaa ay mudo sheegayaan in ay ka go’ayaan Soomaaliya inteeda kale ,
Dad badan ayaa waxa aay aaminsanyihiin in shacabka dhamaan deegaanada Soomaaliya ay yihiin kuwo raba mid nimada iyo madax banaanida Soomaaliya balse cidda halista gelineysaa I ay yihiin Siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Ardaydaiyo aqoonyahanada intooda kale waa kuwa uu kujro dareenka gaarka ah ee ku aadan Midnimada umadda Soomaaliyeed ee la dhaliyay xurna laga dhigay 58-sano kahor , Axmed Weheliye Gaashaan waxaa mid kamid ah jaamacadaha magaalada Muqdishoku yaala ka bartaa cilmiga siyaasadda. Waxaana uu yiri “Hadii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u baahanahay mid nimo iyo dowladnimo dhameystiran balse siyaasiyiinta ayaa dano gaar ah dhaaf siisanaya”
Waxaa dhibatada lagu sheegaa in ay tahay marka siyaasiyiinta Soomaaliyeed uusookala dex galo khilaaf un ay badakkii xal raadinta halis geliyaan midnimada islamarkaana ay sabab u noqday kala tag waxaase loo baahaanyhay in xal loo raadiyo dibaato kasta ama khilaaf kasta laga gudbo lana eego muhiimada midnimada. Sida uu leeyahay Shiikh Mustafa Ismaaciill Haaruun mar uu jeeinayay muxaadaro ku aadan muhiimada midnimada iyo sida ay Soomaalidu ku ilaaashan karaan.
Dad wax garad ah ayaa Hornafrik u sheegay in loo baahanayahay in madaxda Dowladda ay dedaal badan ku bixiyaan sidii Soomaalialnd loola heshiin lahaa dhanka Soomaaliland na looga bahaanyahay in ay eegaan Midnimada iyo danta ama baahida labada shacab ee ku aadan mab da’a Soomaali weyn.
Madaxweyne Farmaajo “Xorriyadda aan maanta ku naalooneyno waa mid lagu soo bixiyay dhiig iyo dhaqaale”.
Madaxda Galmudug oo lagu dhax dhaxaadinayo Muqdisho.